Mateu 17 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 17:1-27
Jesu anoshanduka (1-13)
Kutenda kwakaita setsanga yemasitadhi (14-21)
Jesu anotaura zvakare nezverufu rwake (22, 23)
Mutero wakabhadharwa nemari yakatorwa mumuromo mehove (24-27)
17 Pashure pemazuva 6, Jesu akaenda naPetro naJakobho nemunin’ina wake Johani, ndokukwira navo mugomo refu refu vari vega.+ 2 Uye akashanduka pamberi pavo; chiso chake chakatanga kupenya sezuva, nguo dzake dzekunze dzikabwinya* sechiedza.+ 3 Uye vakazongoona Mozisi naEriya vava kukurukura naye. 4 Petro akabva ati kuna Jesu: “Ishe, zvakanaka kuti tiri pano. Kana muchida, ndichadzika matende matatu pano, rimwe renyu, rimwe raMozisi, uye rimwe raEriya.” 5 Achiri kutaura kudaro, gore raipenya rakabva ravafukidza, uye inzwi raibva mugore racho rakabva rati: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu anodiwa, wandafarira.+ Muteererei.”+ 6 Pavakanzwa izvi, vadzidzi vakawira pasi vakatya kwazvo. 7 Jesu akabva aswedera pedyo navo, uye achivabata, akati: “Simukai. Musatya.” 8 Pavakasimudza misoro, hapana wavakaona kunze kwaJesu chete. 9 Pavakanga vachiburuka mugomo, Jesu akavaudza kuti: “Musaudza vanhu zvamaratidzwa kusvikira Mwanakomana wemunhu amutswa kuvakafa.”+ 10 Asi vadzidzi vakamubvunza kuti: “Saka nei vanyori vachiti Eriya ndiye anofanira kutanga kuuya?”+ 11 Akapindura achiti: “Eriya zvechokwadi ari kuuya uye achadzorera zvinhu zvese.+ 12 Asi ndinoti kwamuri, Eriya akatouya, uye havana kumuziva asi vakaita zvavaida naye.+ Izvi ndizvo zvichaitikawo kuMwanakomana wemunhu; achatambura mumaoko avo.”+ 13 Vadzidzi vakabva vaziva kuti akanga achitaura navo nezvaJohani Mubhabhatidzi. 14 Pavakasvika pedyo nevanhu,+ mumwe murume akasvika kwaari, akamupfugamira akati: 15 “Ishe, nzwirai mwanakomana wangu ngoni, nekuti ane pfari uye ari kurwara. Anowanzopunzikira mumoto uye mumvura.+ 16 Ndauya naye kuvadzidzi venyu, asi vatadza kumurapa.” 17 Jesu akapindura achiti: “Imi chizvarwa chisina kutenda, chakamonyana,+ ndinofanira kuramba ndiinemi kusvikira riini? Kusvikira riini ndichikuitirai mwoyo murefu? Uyai naye pano.” 18 Jesu akabva atuka dhimoni racho, rikabuda maari, uye mukomana wacho akabva angopora kubvira panguva iyoyo.+ 19 Vadzidzi vakabva vauya kuna Jesu pasina vamwe vanhu vakati: “Nei tatadza kuridzinga?” 20 Akati kwavari: “Pamusana pekutenda kwenyu kudiki. Nekuti chokwadi ndinoti kwamuri, kana muine kutenda kwakaenzana nekatsanga kemasitadhi, muchati kugomo iri, ‘Ibva pano uende apo,’ uye richabva, uye hapana chinhu chamuchatadza.”+ 21 * —— 22 Pavakanga vakaungana muGarireya Jesu akati kwavari: “Mwanakomana wemunhu achatengeswa mumaoko evanhu,+ 23 vomuuraya, uye pazuva rechitatu achamutswa.”+ Izvi zvakavarwadza zvikuru. 24 Pavakasvika muKapenaume, varume vaitora mutero wemadrakema* maviri vakasvika kuna Petro, vakati: “Mudzidzisi wenyu anotera mutero wemadrakema maviri here?”+ 25 Iye akati: “Hongu.” Asi paakapinda mumba, Jesu ndiye akatanga kutaura naye achiti: “Simoni, unofungei? Madzimambo enyika anotora miripo kana mutero* kunaani? Kuvanakomana vavo here kana kuti kuvamwe vanhu?” 26 Paakati: “Kuvamwe vanhu,” Jesu akati kwaari: “Saka kana zvakadaro, vanakomana havateri. 27 Asi kuti tirege kuvagumbura,+ enda kugungwa, ukande chirauro, wotora hove inotanga kubuda, uye paunoivhura muromo, uchawana mari yesirivha.* Itore uvape, ubhadharire ini newe.”
^ Kana kuti “dzikachena.”
^ Uyu unofanira kunge waiva mutero waibvisiswa munhu mumwe nemumwe.
^ ChiGir., “mari yesitateri,” iyo inonzi ndiyo tetradrakema. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.